DAAWO: Iska Horimaad Khasaare geystay oo ka dhacay duleedka magaalada Laascaanood, Yuuse dhexmaray?
August 4, 2019 NEWS 2
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya iska horimaad xoogan oo xalay saqdii dhexe ka dhacay saldhig ay leeyihiin ciidamada Somaliland ee kusugan gobalka Sool, gaar ahaana duleedka magaalada Laascaanood iyo dabley hubeysan oo u dhashay deegaankaas.
Iska horimaadka ayaa ka dhacay halka lagu magacaabo Buurta Sayidka ama geerashka Khaarijiye, waxaana la xaqiijiyey in ay dhaawacmeen qaar kamid ah Askarta ciidamada Somaliland, sidaas oo kalena ay dab-qabadsiiyeen mid kamid ah goobahaas markii ay gudaha u galeen.
Maleeshiyada weerarka geystay ma jirto wax faahfaahin oo laga hayo dhankooda, balse wararka ayaa sheegaya in uu jiro khasaare dhaawac ah oo soo kala gaaray labada dhinacba.
Maleeshiyaad u dhashay deegaanka Sool, oo kasoo horjeeda joogitaanka ciidamada Somaliland ee gobalkaas ayaa marar badan fuliya weeraro habeenimo, kuwaas oo ay la beegsadaan ciidamada Somaliland.
Majirto cid katirsan Somaliland oo ka hadashay arrimahan, balse maalmihii u dambeeyey ciidamadii ugu badnaa ayay maamulkaas ka qaadeen Tukaraq iyo agagaarkeeda iyagoo u jiheeyey dhinaca deegaanka Ceerigaabo oo ay isku hayeen jabhada Col, Caare.
Allaah (swt) ha inoo wada naxariisto gaar ahaan Yariisoow iyo intii lala dilay iyo muslimiintoo dhan.Yariisoow wax kale looma dilin ee ahayn war dawlada iyo shacabka ha loo soo celiyo dhulkooda iyo guryahooda.Madaxda USnaC taas marna ma yeelayaan.